Ogaden News Agency (ONA) – Baasaboorka Itoobiya oo Noqday Midka Ugu Meeqaan Hooseeya Dunida.
Baasaboorka Itoobiya oo Noqday Midka Ugu Meeqaan Hooseeya Dunida.
Daraasad ay samaysay hay’ada caalamiga ah ee lagumagacaabo International Pasabort Index ayay ku ogaatay in Pasabort-ka wadanka Itoobiya uu kaalin aad uliidata kaga jiro Baasaboorada caalamka.
Sida warbixinta ay hay’adu soosaartay lagu qeexay Baasaboorka wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa guud ahaan aduunka gaga jiro kaalinta 184aad marka laga eego halbeega Baasaboorada lagu qiimeeyo.
Sidoo kale hay’ada ayaa sheegtay in Baasaboorka wadanka Itoobiya uu wadamada Africa kanoqday mid kamid ah sadexda wadan ee ugu liita guud ahaan wadamada Africa, arintaas oo muujinaysa xushmada uu wadanka Itoobiya kulee3ahay guud ahaan wadamada caalamka iyo wadamada Gobolka ba.
Dhinaca kale hay’ada ayaa carab bowday in wadanka Itoobiya uu yahay midka ugu qaxootiga badan wadamada Africa, waxaana sida ay hay’adu sheegtay guud ahaan wadamada dunida lagu arkayaa xoqooti Itoobiyaan ah kuwaas oo wax xushmad ah aan kuhaysanin wadamada ay uqaxaan.
Qoxootiga siibadanaya ee wadanka Itoobiya iyo xushmad la’aanta Baasaboorka wadankooda ayaa noqday kuwo iska hor imaanaya waxaana aqabada qoxootiga Itoobiyaanka ah haysata ee ugu wayn lagu sheegay qadarin la’aanta kuhaysata wadamada ay uqaxayaan.
Hoos udhaca kuyimid Baasaboorka wadanka ayaa lagu sheegay maamul xumo iyo musuq maasuq hadheeyay wadanka, waxaana wadan kasta oo dunida ah lagu arkayaa safiirka Itoobiya ee wadankaas oo mukhalis dadka soo dhoofiya isu badalay.
Dhinaca kale waxaa kasii daraya xaaladaha amaan ee wadanka waxaana soo ifbaxaya dagaalo iyo kacdoono hor leh oo lagu diidan yahay maamulka wadanka lahadhay ee TPLF.